ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) - MATHS LAB
(မိုးမခ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၇
MATHS LAB လုပ်​နည်း
၃။ လိုအပ်​သည့်​ ပ​စ္စည်းများ -ဥပမာ - ဇယား၊ ဂဏန်းတွက်​စက်​၊ အကွာအ​ဝေးတိုင်းကိရိယာ
၆။​ ကောက်​ချက်​၊ ရလဒ်​၊ ​တွေ့ရှိချက်​
TUTORIAL ပုစ္ဆာ နှင့် LAB ပုစ္ဆာနှင့်​ ကွာခြားပုံ
Lecturer တွင် သင်​ပြီးသားဖြစ်​စရာကို ပြန်​​မေးခြင်းဖြစ်​သည် သင်ပြီးသားဖြစ်စရာ မလို။ သီအိုရီ လိုသ​လောက်​ကို သင်​​ပေး၍ ​ကျောင်​သားကိုတွက်​တွက်​ခိုင်းသည်​။
သင်ရိုးအတိုင်းသွားစရာ မလို။ Lab လုပ်လို့ ကောင်းတာပဲ ရွေးလုပ်သည်။
Lab Course ကို သပ်သပ်ဆွဲရသည်
ကျောင်စားကို ဖြေခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည် ဖြေတတ်အောင်သင်ပေးပြီးမှ ဖြေခိုင်း
Lab လုပ်​၍ ​ကောင်း​သောပုစ္ဆာများမှာ
၁။ အ​ဖြေကို လက်​​တွေ့စမ်းသပ်​၍ ကြည့်​နိုင်​​သောအရာများ
ဥပမာ - အကွာအ​ဝေး၊ ဧရိယာ၊ ပါမြူ​တေးရှင်း permutation
၂။ အ​ဖြေတစ်​ခုတည်းကို တွက်​နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်​ ချိန်​ကိုက်​နိုင်​​သော ပုစ္ဆာများ
Example of Lab 1
Find the number of permutations of four different things taken all atatime
၁။ ခေါင်းစဉ်​ - အရာဝတ္ထု ၄ ခု ၏ ​အစီအစဉ် ​ကို ရှာခြင်း
၂။ ရည်​ရွယ်​ချက်​ - က ခ ဂ ဆ ဟူ​သော အရာဝတ္ထု ၄ ခု ၏ ​အစီအစဉ် ​အ​ရေအတွက်​ကို ပုံ​သေနည်းဖြင့်​တစ်​နည်း လက်​​တွေ့စီကြည့်​​သောနည်းဖြင့်​တစ်​နည်း ရှာ၍ ချိန်​ကိုက်​ရန်​။
အရာဝတ္ထု ၄ ခု ​နေရာတွင် ​ကြိုက်​ရာ သ​​င်္ကေတ​ ၄ ခု ကိုသုံးနိုင်​သည်​။ A BC D, # $ % & ။
၃။ လိုအပ်​သည့်​ ပစ္စည်း - စာရွက်​ ၊ ခဲတံ၊ ​ဘောပင်​။
၄။ သီအိုရီ -
n! = 1.2.3 ... ... ... n
2! = 1.2 = 2
3! = 1.2.3 = 6
2! = 1.2 =2 သည် ​မတူ​သောအရာဝတ္ထု နှစ်​ခု ကို စီ၍ရ​သော အစီအစဉ်​အ​ရေအတွက်​ဖြစ်​သည်​။
၄င်းသည်​ မတူ​သော အရာဝတ္ထု ၃ ခုကို စီ၍ရ​သော အစီအစဉ်​အ​ရေအတွက် ​ဖြစ်​သည်​။
4! = 1.2.3.4 = 24
မတူ​သော အရာဝတ္ထု ​၄ ခုကို A,B,C,D ဟု​ခေါ်ပါ။ ၎င်းတို့ကို စီ ​သော် ...
ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADCB, ADBC, ... ... ... .. 24 ခု
မတူ​သော အရာဝတ္ထု ​၄ ခု၏ ​အစီအစဉ်​အ​ရေအတွက်​ကို ပုံ​သေနည်းဖြင့်​ရှာခြင်းနှင့်​ ဧကန်​တကယ်​စီခြင်းသည် ​အတူတူဖြစ်​သည်​။​
Example of Lab 2
Find the distance between two given points.
၁။ ​ခေါင်းစဉ်​ - အမှတ်​နှစ်​ခု၏ ​အကွာအ​ဝေးကို ရှာခြင်း
၂။ ရည်​ရွယ်​ချက်​ - (1,4) နှင့်​ (3,0) တို့၏ ​အကွာအ​ဝေးကို ပုံ​သေနည်းသုံး၍ ရှာပြီး ထိုအမှတ် ​နှစ်​ခု၏​အကွာအ​ဝေးကို တိုင်းကြည့်​ရန်​။
၃။ လိုအပ်​သည့်​ပစ္စည်းများ - ဇယား၊ ဂဏန်းတွက်​စက်​၊ အကွာအ​ဝေးတိုင်းရန်​ ကိရိယာ ​ပေတံ။
Definitions of x-axis, y-axis, origin, x-coordinate, y-coordinate, point (a,b).
Formula for distance between two points.
အမှတ်​ A (3,0)နှင့်​ B (1,4) တို့၏ ​အကွာအ​ဝေး A B ကို ပုံ​သေနည်းသုံး၍ ရှာပါ။
ထိုအမှတ်​နှစ်​ခု၏ ​အကွာအ​ဝေးကို တိုင်းကြည့်​ပါ။
AB = ပုံ​သေနည်းဖြင့်​ ရ​သောအ​ဖြေ
AB = တိုင်းကြည့်​၍ ရ​သောအ​ဖြေ
ပုံ​သေနည်းဖြင့်​ရ​သောအ​ဖြေသည်​ ဒသမများစွာ ရှာနိုင်​သည်​။ သို့​သော် ​ဧကန်​တကယ် တိုင်း၍ရ​သောအ​ဖြေသည်​ ဒသမနှစ်​​နေရာ​လောက်​ထက်​ ပို၍မရပါ။ ထို့​ကြောင့်​ ထိုအ​ဖြေနှစ်​ခု တူဖို့ ခက်သည်​။
Idea for Lab
∆ ၏​ areaကို အမျိုးမျိုးရှာ၍ ချိန်​ကိုက်​ခြင်းသည် ​Lab အတွ​က်​ ကောင်း​သော idea ဖြစ်​သည်​။
ဥပမာ ∆ = 1/2ab sinC
= 1/2bc sinA
= 1/2 casinB
= 1/2 (အ​ခြေ) . (အမြင့်​)
​အောက်​ပါ​ ပေးထားချက်​များကို သုံး၍ ∆ABC ကိုဆွဲပါ။
a=5, b=2, ∠C = 50
c, ∠A, ∠B တို့ကို တိုင်း၍ ရ​သောတန်​ဖိုးများကို မှတ်​ထားပါ။
∆ = 1/2 ab sinC ဟူ​သောပုံ​သေနည်းဖြင့်∆ ၏ ​ဧရိယာကိုရှာပါ။
ပြီးလျှင်​ တိုင်းတာ၍ရ​သော တန်​ဖိုးများကို သုံး၍ ∆၏ ဧရိယာကို 1/2 bc sinA, 1/2 ca sinB တို့သုံး၍ ရှာပါ။ နှိုင်းယှဉ်​ကြည့်​ပါ။
∆ = 1/2 (အ​ခြေ).(အမြင့်​) တွင် ​ကြိုက်​ရာအနားတစ်​ခုကို အ​ခြေဟုယူ၍ ၎င်း၏ ​မျက်​နှာချင်းဆိုင်​​ထောင့်​၏ အမြင့်​ကို ယူနိုင်​သည်​။